Ny mpiasa tsy avotra amerikanina amerikana mahazo COVID dia irery
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny mpiasa tsy avotra amerikanina amerikana mahazo COVID dia irery
Airlines • Aviation • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Mpikambana ekipa fiaramanidina amerikana
Ny politika vaovaon'ny American Airlines dia midika fa ny mpiasa tsy vita volo izay midina miaraka amin'ny COVID-19 dia tsy maintsy mampiasa ny androny marary amin'ny fotoana rehetra ilain'izy ireo miala amin'ny asany. Mampitsahatra ny fotoana fialan-tsasatra manokana napetraky ny Amerikanina taorian'ny nidiran'ny valanaretina coronavirus voalohany - ho an'ireo tsy voarohirohy, izany hoe.
Raha vao niseho ny COVID-19 dia orinasa maro no nafindra hamorona fialan-tsasatra ho an'ireo izay nidina niaraka tamin'ny coronavirus.
Ankehitriny rehefa manana vaksiny omena alalana amin'ny COVID-19 ny sampan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina, dia manova ny endrik'ireo orinasa vonona hanao inona ho an'ireo mpiasan'izy ireo misafidy ny tsy hanao vaksiny izany.
Mpanakarama vaovao marobe amin'izao fotoana izao no takiana mba hanaporofoana fa misy vaksiny hamitaana ny fizotran'ny karama.
Ny politika vaovao dia manan-kery amin'ny fiandohan'ny volana oktobra ho an'ireo tsy mpanao vazy, na izany aza, ny mpiasan'ny American Airlines izay vita vaksiny dia mbola voarakotry ny politikan'ny fialan-tsasatra ary tsy mila mampiasa ny androny marary mba haka fotoana tsy hiasana. tsara.
Toa fironana teo amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka io, satria ny Alaska Airlines koa dia nanakana ny mpiasa tsy mifangaro hampiasa COVID-19 karama manokana amin'ny asa tsy hita noho ilay virus.
Tsy izay ihany fa manome valisoa $ 200 ho an'ny mpiasany koa ny Alaska Airlines noho ny fanaovana vaksiny, ary ny mpiasa vaovao rehetra mandroso dia tsy maintsy mampiseho porofo momba ny vaksiny alohan'ny hanakaramana azy amin'ny fomba ofisialy. Ny kaompaniam-pitaterana dia mitaky ny mpiasa rehetra tsy vita vaksiny handray anjara amin'ny fandaharam-pianarana fanabeazana vaksinina.
Tamin'ny volana lasa, United Airlines no mpitatitra amerikana voalohany nitaky vaksiny ho an'ny mpiasa an-trano rehetra. United dia manana mpiasa 67,000 2021 any Etazonia ary ny mpikarama vaovao dia voatery nanaporofo ny fanaovana vaksiny hatramin'ny volana Jona XNUMX. Ao amin'ny biraon'ny orinasa United dia tsy maintsy misaron-tava ny mpiasa tsy voarohirohy.
Ny Frontier Airlines koa dia hitaky ny hanaovana vaksiny feno ny mpiasa amin'ny 1 Oktobra amin'ity taona ity. Ireo mpiasa izay misafidy ny tsy hanao vaksiny dia takiana handray anjara amin'ny fitsapana mahazatra COVID-19.
Seranam-piaramanidina hafa Miezaka ny hanao vaksiny ny mpiasan'izy ireo toa ny nataon'i Alaska Airlines tamin'ny fanomezana tolotra toa ny karama fanampiny na ny karama fialan-tsasatra.
Inona no mahatonga ireo fanovana ireo?
Rehefa Nankatoavin'ny Federal Drug Administration (FDA) ny Pfizer ho vaksininy, io no nanokatra ny vavahady hanovan'ny orinasa ny politikany ho an'ny COVID-19, satria io matetika no antony nampiasan'ny mpiasa izay tsy te hanao vaksiny - fa tsy nisy vaksinina nankatoavina tamin'ny fomba ofisialy.
Ny zotram-piaramanidina dia mitaky an-tsambo rehetra mba hisaron-tava mandritra ny faharetan'ny sidina, mazava ho azy raha tsy rehefa misakafo na misotro.